(trg)="1"> Unogona Kumirira Here ?
(trg)="2"> UNGAFUNGIDZIRA here kuti vanhu vanopedza nguva yakawanda zvakadini makore ose vakangomirira ?
(trg)="3"> Vanomirira mumutsetse pachitoro kana kuti panotengeswa peturu .
(trg)="4"> Vanomirira kuti vapiwe zvokudya muresitorendi .
(trg)="5"> Vanomirira kuti vaone chiremba kana kuti chiremba wamazino .
(trg)="6"> Vanomirira mabhazi nezvitima .
(trg)="7"> Hungu , nguva yakawanda zvinoshamisa muupenyu hwomunhu inopedzerwa pakumirira kuti zvinhu zviitike .
(trg)="8"> Maererano nokumwe kufungidzira , vanhu vokuGermany voga vanorasikirwa namaawa mabhiriyoni 4,7 pagore vakangomirira mumigwagwa yakawandisa motokari !
(trg)="9"> Mumwe munhu akaverenga akaona kuti maawa iwayo akaenzana noupenyu hwose hunotarisira kuraramwa navanhu vanenge 7 000 .
(trg)="10"> Kumirira kungava kunoodza mwoyo kwazvo .
(trg)="11"> Mazuva ano , hakumboiti sokune nguva yakaringana yokuita zvinhu zvose , uye kufunga nezvezvimwe zvinhu izvozvo zvatinofanira kunge tichiita kungaita kuti kumirira kuve muedzo chaiwoiwo .
(trg)="12"> Munyori anonzi Alexander Rose akamboti : “ Chimwe chinhu chinorwadza zvikuru muupenyu kumirira . ”
(trg)="13"> Mutungamiriri wezvenhau dzenyika yeAmerica Benjamin Franklin akaziva kuti kumirira kungavawo kunodhura .
(trg)="14"> Anodarika makore 250 apfuura , akati : “ Nguva imari . ”
(trg)="15"> Ndicho chikonzero nei mabhizimisi achitsvaka nzira dzokudzivisa kunonoka kusina kufanira pakuitwa kwebasa .
(trg)="16"> Zvinhu zvakawanda zvinogadzirwa munguva shoma zvingareva mhindu yakakura .
(trg)="17"> Mabhizimisi anobatsira vanhu zvakananga anoedza kuvaitira basa nokukurumidza — zvokudya zvinogara zvakagadzirwa , kubhanga mari uri mumotokari yako [ drive - through banking ] , nezvimwewo — nokuti anoziva kuti kufadza mutengi kunosanganisira kuita kuti nguva yokumirira ive shoma .
(trg)="18"> Kutambisa Upenyu Hwedu
(trg)="19"> Mumwe mudetembi wokuAmerica womuzana remakore rechigumi nepfumbamwe Ralph Waldo Emerson akambonyunyuta kuti : “ Upenyu hwavanhu hwakareba zvakadini hunorasika mukumirira ! ”
(trg)="20"> Munguva ichangopfuura , munyori Lance Morrow akanyunyuta nezvokufinhwa uye kusanzwa zvakanaka nokumirira .
(trg)="21"> Asi ipapo akataura nezve “ nhamo isinganzwisisiki yokumirira . ”
(trg)="22"> Chii ichocho ?
(trg)="23"> “ Zivo yokuti chinhu chomunhu chinokosha kupfuura zvimwe , nguva , chikamu choupenyu hwomunhu , chiri kubiwa , kurasika zvachose . ”
(trg)="24"> Zvinosuruvarisa , asi ndezvechokwadi .
(trg)="25"> Nguva inorasika nemhaka yokumirira inorasika zvachose .
(trg)="26"> Chokwadi , kudai upenyu husiri hupfupi kwazvo , kumirira kwaisazonyanyova chikonzero chokushushikana .
(trg)="27"> Asi upenyu hupfupi .
(trg)="28"> Zviuru zvemakore zvakapfuura , munyori wepisarema romuBhaibheri akati : “ Mazuva amakore edu anosvika makore makumi manomwe , kana tine simba makore makumi masere ; asi kunyange achikudzwa ndiko kutambudzika nenhamo bedzi .
(trg)="29"> Nokuti gare gare aenda , nesu tabhururuka taenda . ”
(trg)="30"> Chero kwatinogara uye zvisinei nokuti tingava vanaani , upenyu hwedu — anova mazuva , maawa , maminiti anenge ari mberi kwedu patinoberekwa — hunopera .
(trg)="31"> Asi , hatigoni kudzivisa mamiriro ezvinhu atinomanikidzwa kupambadza imwe yenguva iyoyo inokosha tichimirira zvimwe zviitiko kana kuti vanhu .
(trg)="32"> Kudzidza Kumirira
(trg)="33"> Vakawanda vedu takambova mumotokari inenge ine mutyairi anoramba achiedza kupindira motokari inenge iri mberi kwake .
(trg)="34"> Kazhinji kacho , hapana chaanenge achimhanyira — mutyairi wacho haana waari kukurumidza kuda kunoona .
(trg)="35"> Kunyange zvakadaro , haangamiriri kuti kufamba kwake kudzorwe nomumwe mutyairi .
(trg)="36"> Kusashivirira kwake kunoratidza kuti haana kudzidza kumirira .
(trg)="37"> Kudzidza ?
(trg)="38"> Hungu , kuziva kumirira chidzidzo chinofanira kudzidzwa .
(trg)="39"> Hapana munhu anoberekwa anakwo .
(trg)="40"> Vacheche vanochemera kutarisirwa pakarepo pavanenge vava nenzara kana kuti vasinganzwi zvakanaka .
(trg)="41"> Pavanokura ndipo pavanongozonzwisisa kuti dzimwe nguva vanofanira kumirira zvavanoda .
(trg)="42"> Zvechokwadi , sezvo kumirira chiri chinhu chisingadzivisiki muupenyu , kuziva kumirira kwaungaita nokushivirira pazvinenge zvakafanira chiratidzo chomunhu akura .
(trg)="43"> Chokwadi , pane mamiriro ezvinhu okukurumidzira pazvinonzwisisika kana ukatadza kushivirira .
(trg)="44"> Zvinonzwisisika kuti murume wechiduku anomhanya nomudzimai wake kuchipatara nemhaka yokuti mucheche wavo mutsva ava kuda kuberekwa angasashivirira zvinononotsa .
(trg)="45"> Ngirozi dzaikurudzira Roti kuti abude muSodhomu dzakanga dzisina kugadzirira kumirira apo Roti ainonoka .
(trg)="46"> Kuparadzwa kwakanga kwava kuda kuitika , uye upenyu hwaRoti nemhuri yake hwakanga hwava mungozi .
(trg)="47"> Zvisinei , muzviitiko zvakawanda , upenyu hunenge husiri mungozi apo vanhu vanomanikidzwa kumirira .
(trg)="48"> Pazvinenge zvakadaro , zvinhu zvaizova zvakanaka zvikuru kana munhu wose aidzidza kushivirira — kunyange kana kumirira kwacho kwaikonzerwa nokunonoka kwomumwe munhu kana kuti kusafarira .
(trg)="49"> Uyezve , zvaizova nyore kushivirira kana munhu wose akadzidza kuti angashandisa sei nguva inopedzwa akamirira nenzira inobatsira .
(trg)="50"> Bhokisi riri papeji 5 rine mazano okuita kuti kumirira kusangokwanisa kutsungirirwa chete asi kuti kutobatsira .
(trg)="51"> Hazvingarerutswi kuti kusashivirira kungaratidza kudada zvikuru , kunzwa kwokuti munhu anokosha kwazvo zvokusafanira kumirira .
(trg)="52"> Nokuda kwaani naani ane maitiro akadaro , mashoko anotevera omuBhaibheri anofanira kufungwa nezvawo , anoti : “ Ane mwoyo murefu anopfuura ane mwoyo unozvikudza . ”
(trg)="53"> Kuzvikudza , kana kuti kudada , kusakwana kwounhu kwakakomba , uye chirevo cheBhaibheri chinoti : “ Mumwe nomumwe , unomwoyo unozvikudza , unonyangadza Jehovha . ”
(trg)="54"> Naizvozvo , kudzidza kushivirira — kudzidza kumirira kwatingaita — kungada kuti tinyatsozviongorora noukama hwedu navanhu vakatipoteredza .
(trg)="55"> Kushivirira Kuchapiwa Mubayiro
(trg)="56"> Tinowanzoona kumirira kuri nyore kana tichigutsikana kuti chatiri kumirira chacho chinokosha zvokuti kana chikanonoka hachinei uye kuti pakupedzisira chichauya chaizvoizvo .
(trg)="57"> Nezveizvi , zvakanaka kufunga kuti vanamati vaMwari vose vechokwadi vari kumirira kuzadzika kwezvipikirwa zvake zvakaisvonaka zvinowanikwa muBhaibheri .
(trg)="58"> Somuenzaniso , tinoudzwa mupisarema rakafuridzirwa naMwari kuti : “ Vakarurama vachagara nhaka yenyika , vachagaramo nokusingaperi . ”
(trg)="59"> Chipikirwa ichi chakadzokororwa nomuapostora Johani paakati : “ Uyo anoita kuda kwaMwari anoramba aripo nokusingaperi . ”
(trg)="60"> Zvakajeka kuti kudai taigona kurarama nokusingaperi , kumirira hakwaizova chinetso chikuru .
(trg)="61"> Asi iye zvino hatisi kurarama nokusingaperi .
(trg)="62"> Asi zvinomboita chaizvoizvo here kutaura nezvoupenyu husingaperi ?
(trg)="63"> Usati wapindura , funga kuti Mwari akasika vabereki vedu vokutanga vane tarisiro yokurarama nokusingaperi .
(trg)="64"> Yaingova bedzi mhaka yokuti vakatadza yakaita kuti varasikirwe netarisiro iyoyo , yavo zvose neyavana vavo — kusanganisira isu .
(trg)="65"> Zvisinei , vachangoita chivi , Mwari akazivisa chinangwa chake chokuchinja migumisiro yokusateerera kwavo .
(trg)="66"> Akapikira kuuya kwe “ mbeu , ” yakazova Jesu Kristu . — Genesi 3 : 15 , NW ; VaRoma 5 : 18 .
(trg)="67"> Kana isu somunhu oga tichizobatsirwa nokuzadzika kwezvipikirwa zvake tisu tinosarudza .
(trg)="68"> Kudaro kuchada kushivirira .
(trg)="69"> Kuti ritibatsire kudzidza kushivirira kwakadai , Bhaibheri rinotikurudzira kufungisisa muenzaniso womurimi .
(trg)="70"> Anodyara mbeu yake uye anofanira kumirira achishivirira — achiita zvaangagona kuti adzivirire chirimwa chake — kusvikira yava nguva yokukohwa .
(trg)="71"> Ipapo kushivirira kwake kunopiwa mubayiro , uye anoona zvibereko zvebasa rake .
(trg)="72"> Muapostora Pauro anodudza mumwe muenzaniso wokushivirira .
(trg)="73"> Anotiyeuchidza nezvevarume navakadzi vakare vakatendeka .
(trg)="74"> Vakanga vachitarisira kuitwa kwezvinangwa zvaMwari , asi vaifanira kumirira nguva yaMwari yakatemwa .
(trg)="75"> Pauro anotikurudzira kutevedzera ava , “ vanogara nhaka yezvipikirwa nokutenda nokushivirira . ” — VaHebheru 6 : 11 , 12 .
(trg)="76"> Hungu , kumirira chinhu chisingadzivisiki muupenyu .
(trg)="77"> Asi hakufaniri kuramba kuchikonzera kushushikana .
(trg)="78"> Nokuda kwavaya vari kumirira kuitwa kwezvipikirwa zvaMwari , kunogona kukonzera mufaro .
(trg)="79"> Vanogona kushandisa nguva inopedzwa vakamirira nokukudziridza ukama hwapedyo naMwari uye kuita mabasa anoratidza kutenda kwavo .
(trg)="80"> Uye nomunyengetero , kudzidza , uye kufungisisa , vangakudziridza chivimbo chisingazununguki chokuti zvose zvakapikirwa naMwari zvichaitika munguva yake yakafanira .
(trg)="81"> [ Bhokisi / Mifananidzo iri papeji 5 ]
(trg)="82"> DEREDZA KURWADZA KWOKUMIRIRA !
(trg)="83"> Fanoronga !
(trg)="84"> Kana uchiziva kuti uchafanira kumirira , iva akagadzirira kuverenga , kunyora , kuruka , kukirosha , kana kuti batikana mune mamwe mabasa anobatsira .
(trg)="85"> Shandisa nguva yacho kufungisisa , chimwe chinhu chinoramba chichiwedzera kuoma munyika inoita zvinhu zvokukurumidzira .
(trg)="86"> Iva nezvinhu zvokuverenga pedyo norunhare kuti ushandise kana wambomiswa ; mumaminiti mashanu kana kuti gumi , unogona kuverenga mapeji anoverengeka .
(trg)="87"> Paunenge wakamirira uri muboka ravanhu , shandisa mukana wacho , kana zvakakodzera , kutanga kukurukurirana navamwe uye kutaurirana navo pfungwa dzinovaka .
(trg)="88"> Iva nebhuku rokunyorera kana kuti chimwe chinhu chokuverenga mumotokari yako nokuda kwenguva dzaunozomirira zvawanga usingatarisiri .
(trg)="89"> Tsinzinya , zorora , kana kuti nyengetera .
(trg)="90"> KUMIRIRA KUNOBUDIRIRA ZVIKURUKURU INHAU YAMAITIRO UYE YOKUFANOFUNGA .
(trg)="2"> “ Mwari anogovera kutsungirira nenyaradzo ngaakubvumirei kuti pakati penyu muve nemafungire akafanana neaiva naKristu Jesu . ” — VAROMA 15 : 5 .
(trg)="3"> Mafungire omunhu anogona sei kuva nezvaanoita paupenyu hwake ?
(trg)="4"> MAFUNGIRE anokonzera mutsauko mukuru muupenyu .
(trg)="5"> Mafungire okusakendenga kana kuti okushingaira , mafungire akanaka kana kuti asina kunaka , mafungire okurwa kana kuti okushandira pamwe , mafungire okunyunyuta kana kuti okuonga ane zvikuru zvaanoita panzira iyo munhu anobata nayo mamiriro ezvinhu uye kuti vamwe vanhu vanoita sei kwaari .
(trg)="6"> Nemafungire akanaka , mumwe anogona kufara kunyange mumamiriro ezvinhu akaoma zvikuru .
(trg)="7"> Kumunhu ane mafungire akaipa , hapana chinoratidzika kuti chakarurama , kunyange apo — mumaonero akanaka — upenyu hunenge hwakanaka .
(trg)="8"> Munhu anodzidza sei mafungire ?
(trg)="9"> Mafungire — akanaka kana akaipa — anogona kudzidzwa .
(trg)="10"> Chokwadi ndechokuti anofanira kudzidzwa .
(trg)="11"> Ichitaura nezvekasvava , Collier’s Encyclopedia inoti : “ Kanofanira kuwana kana kuti kudzidza mafungire akanozoguma kava nawo , sezvakanongofanira kuwana kana kuti kudzidza mutauro kana unyanzvi hupi nohupi . ”
(trg)="12"> Tinodzidza sei mafungire ?
(trg)="13"> Nepo zvinhu zvakawanda zvine zvazvinoita , zvakatipoteredza uye vatinoshamwaridzana navo zvine simba guru .
(trg)="14"> Enisaikoropidhiya yabva kududzwa inoti : “ Tinodzidza kana kuti kupinza mupfungwa , sokunge kuti nokumwirira , mafungire avaya vatinoshamwaridzana navo zvikuru . ”